Kaydka dadka qaata cuntada ee la kulan - Cuntooyinka giraangiraha
Waa wax weyn, sababtoo ah mararka qaarkood waxaan la yaabanahay inay wax cunayaan in ku filan. Waxay ahayd arrin ilaahay bixiyo. ” Taasi waa sida uu Tom u qeexayo waxa Cunnada Wheels ay uga dhigan tahay…
La wadaag Rabitaannada Fasaxyada leh Cunnooyinka kuwa qaata Dabiibbada
Diisambar 4, 2018
Waxaan dhihi karnaa inta badan Cuntada Lugaha Lugta waxay ku saabsan tahay wax ka badan oo keliya cuntooyinka. Marka aan awoodno, waxaan jecelnahay inaan la wadaagno farriimaha fudud the
“In ka badan oo keliya cunto” ayaa muddo dheer halhays u ahayd Cunnooyinka Dhirta. Doorka ugu muhiimsan ee mutadawiciinteena gaarsiinta ay ka ciyaaraan nolosha…
Iyada oo qayb ka ah taxane marmar ah oo ku saabsan sida dadku siyaabo kala duwan uga faa'iidaystaan Cunnooyinka Gawaarida, waxaan jeclaan lahayn inaad la kulanto Tom, cunto…
Judy ahaan kalkaaliye caafimaad oo diiwaangashan, waxay ogtahay qiimaha nafaqada wanaagsan marka ay timaado caafimaadka. Iyo sida qof Cunnada ku qaata…
Waxaan ku faraxsanahay inaan ku dhawaaqno in dad yar oo ka mid ah Cunnooyinka Qoysaska Reerka loo soo bandhigi doono sida Bani-aadamka Minneapolis maalmaha soo socda!…
Cunto karintu ma aha mid ka mid ah howlaha ay ugu jeceshahay Marsha Oliver, laakiin waxay si farxad leh u aqbashay mas'uuliyadeeda iyadoo ah kuugga madaxa qoyskeeda. Si kastaba ha noqotee, waa hawl ay…
Caawintaada, waanu bixinaa!
Xitaa qiimaha gaaska ee rikoodhka ah, tabaruceyaashayadu waxay hubiyaan in qof kasta oo u baahan uu helo cunto - maalin kasta. Waxaad ku caawin kartaa inaad ku biirto ama aad wax ku tabarucdo.
U shaqee iskaa wax u qabso Ku deeq